2020ခုနှစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံးအနီးကပ်ရိုက်ယူထားတဲ့ ဆုရဓာတ်ပုံများ - Mckzone Daily
2020ခုနှစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံးအနီးကပ်ရိုက်ယူထားတဲ့ ဆုရဓာတ်ပုံများ
Posted By: Jasmine Jasmine October 8, 2020
2020 ခုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံး အနီးကပ်ဓာတ်ပုံဆုပေးပွဲကြီးမှာ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံ နှင့် နောက်ဆုံးစကာတင် ဆုစာရင်းတွေကိုကြေငြာခဲ့ပါတယ် ။ 2020ခုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးအနီးကပ်ဓာတ်ပုံဆရာဆုကိုတော့ Gallice Hoarau အမည်ရှိတဲ့ ပြင်သစ်ဓာတ်ပုံဆရာက eel larva ဓာတ်ပုံနဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ အဆိုပါဓာတ်ပုံကိုတော့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ Lembeh ကျွန်းမှာ ရိုက်ယူထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ ဓာတ်ပုံအတော်များများက အင်းဆက်ပိုးလေးတွေကို အနီးကပ်ရိုက်ယူထားပြီး တကယ့်ကိုသဘာဝဆန်လွန်းတဲ့ပုံစံလေးတွေပါ ။ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ နောက်ဆုံးစကာတင်ဆုစာရင်းဝင် ဓာတ်ပုံတွေကို စာဖတ်သူတွေအတွက် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် ။
A glow worm (Lamprigera sp.) leavesatrail of bright green light duringalong exposure photograph. Actuallyaspecies of firefly, this female beetle reaches maturity without undergoing metamorphosis into and adult form and remains wingless her entire life. Sarawak, Malaysia (Borneo).
2020 ခုနှဈရဲ့အကောငျးဆုံး အနီးကပျဓာတျပုံဆုပေးပှဲကွီးမှာ အနိုငျရရှိခဲ့တဲ့ဓာတျပုံ နှငျ့ နောကျဆုံးစကာတငျ ဆုစာရငျးတှကေိုကွငွောခဲ့ပါတယျ ။ 2020ခုနှဈရဲ့အကောငျးဆုံးအနီးကပျဓာတျပုံဆရာဆုကိုတော့ Gallice Hoarau အမညျရှိတဲ့ ပွငျသဈဓာတျပုံဆရာက eel larva ဓာတျပုံနဲ့ အနိုငျရရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ ။ အဆိုပါဓာတျပုံကိုတော့ အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံ Lembeh ကြှနျးမှာ ရိုကျယူထားခဲ့တာဖွဈပါတယျ ။ ဓာတျပုံအတျောမြားမြားက အငျးဆကျပိုးလေးတှကေို အနီးကပျရိုကျယူထားပွီး တကယျ့ကိုသဘာဝဆနျလှနျးတဲ့ပုံစံလေးတှပေါ ။ အနိုငျရရှိခဲ့တဲ့ဓာတျပုံနဲ့ နောကျဆုံးစကာတငျဆုစာရငျးဝငျ ဓာတျပုံတှကေို စာဖတျသူတှအေတှကျ ဝမြှေပေးလိုကျပါတယျ ။
Be the first to comment on "2020ခုနှစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံးအနီးကပ်ရိုက်ယူထားတဲ့ ဆုရဓာတ်ပုံများ"